Warar Dheeraad ah-Wafdi kasocda Puntland oo ay Somaliland u diiday ka qeybgalka Caleema-saarka Garaad Mukhtaar Garaad Cali oo ka dhici lahaa Galbeedka Sool. |
Warar Dheeraad ah-Wafdi kasocda Puntland oo ay Somaliland u diiday ka qeybgalka Caleema-saarka Garaad Mukhtaar Garaad Cali oo ka dhici lahaa Galbeedka Sool.
Sool(GNN):-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya is hor istaag ay Somaliland ku sameysay wafdi kasocday Golayaasha Puntland oo ka qeybgali lahaa Caleema-saarka Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale, kaas oo ka dhici lahaa deegaanka Dharkeyn Geenyo ee galbeedka gobalka Sool, oo ay Ka Taliso Xukuumada Somaliland, waxaana wararku sheegayaan in ay wafdiga u diideen socdaalkooda ciidanka Somaliland.
Wasiirka warfaafinta ee Somaliland Saleebaan Cali Koore oo ay weheliyaan xubno wasiiro iyo madax kale oo ka yimid Hargeysa ayaa sheegay in aysan suuragal aheyn in wafdgan ka socda dhanka Puntland ay la galaan deegaankaas wax hub ah, waxayna sheegeen in looga baahan yahay in ay dhammaan iska reebaan Ilaaladooda.
Guddiga qaban-qaabada Caleema-saarka ayaa sheegay in ay ku mashquulsan yihiin sidii xal looga gaadhi lahaa, waxaanay intaa ku dareen in Waftiga ka socoda somaliland ee Wasiir Saleebaan Cali Kooree uu hogaaminayo ay Kala hadlayaan inay ka Qaybgaaln Waftigan ka socoda maamulka puthland iyagoo u sheegay inay iska reebaan ilaalada iyo hubka oo aaney lasoo gali karin Dirayska ciidanka maamulka puthland iyo hubkooda.
Wafdiga golayaasha Puntland ee u socdaalay Dhargeyn-Geenyo ayaa la kulmay Garaad guud ee beesha Dhulbahante Garaad Jaamac Garaad Cali oo kusugan deegaanka Saaxdheer, waxaana xubnahan ay ka wada hadleen arrimaha markaasi taagnaa.
Gudoomiye kuxigeenka 2aad ee baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa hogaaminayay wafdiga dhanka baarlamaanka iyo Xukuumadda oo gaadhaya ku dhawaad 12 xubnood oo iskugu jira wasiiro, wasiiro kuxigeeno iyo Wasiiru dowlayaal.